घर बनाउन इँटाको विकल्प एएसी ब्लक, १५ प्रतिशत सस्तो :: Setopati
घर बनाउन इँटाको विकल्प एएसी ब्लक, १५ प्रतिशत सस्तो
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, पुस २९
घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ र परम्परागत इँटाको विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने 'अटोक्लेभ्ड एरेटेड कंक्रिट' (एएसी) ब्लक तपाईंको रोजाइ हुन सक्छ।
हेर्दा राम्रो र इँटाभन्दा ठूलो यो ब्लक २०७२ को भुइँचालोपछि धेरै चलनमा आएको र दिनप्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको एएसी ब्लक व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले एएसी ब्लकलाई बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी प्रमाणित गरेको छ।
परम्परागत इँटाको तुलनामा यसको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले साना–ठूला निर्माणमा एएसी ब्लक अझै लोकप्रिय बनिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
जर्मन प्रविधिबाट नेपाल भित्रिएको एएसी ब्लक परम्परगत इँटाभन्दा झन्डै आधा हलुका, कम खर्चिलो र आकर्षक भएकैले धेरैको रोजाइमा परेको एएसी ब्लक कम्पनीहरूको दावी छ। योसँगै नेपालमा एएसी ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योग संख्या पनि थपिँदा छन्।
कसरी बन्छ एएसी ब्लक?
यसबारे हामीले कालिका ग्रुप अन्तर्गत एएसी ब्लक कम्पनीका सिइओ मदन कुमार खड्कासँग जानकारी लिएका छौं।
यस्ता ब्लक सिमेन्ट, आलुमिनियम धातुको धूलो, चुना, बालुवा लगायतको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ।
सबभन्दा पहिले यसमा बालुवा र पानीको मिश्रण गरिन्छ। त्यसपछि सिमेन्ट र चुनासँग मिसाएपछि आलुमिनियमको धूलो मिसाइन्छ। यी सबै पदार्थको घोललाई ब्लक बनाउने फ्रेममा हालेर नियन्त्रित तापक्रममा राखिन्छ।
खड्काका अनुसार माटोको इँटाको तुलनामा हलुका हुने भएकाले भवन निर्माणमा यो ब्लक उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै वातावरण मैत्री, उच्च तापधारण क्षमता, ध्वनी प्रतिरोधी, आगोले नटिप्ने आदि यसका सकारात्मक पक्ष हुन्।
भूकम्पपछि नेपाल भित्रिएको एएसी इँटाले ५ वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको खड्काको भनाइ छ। भूकम्प प्रतिरोधी मुख्य विशेषता भएकैले यसको माग बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।
'तुलनात्मक रूपमा माटोको इँटाभन्दा सस्तो पर्न आउँछ यो ब्लक,' सिइओ खड्काले भने, 'भूकम्प वा अन्य कारणले यसको पर्खाल ढलेर मान्छेलाई लाग्यो भने पनि ठूलो क्षति हुँदैन।'
सस्तो, ‌हलुका र निर्माण छिटो हुने भएकैले युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वमा यस्ता ब्लक चल्तीमा छन्।
४/४ इन्च उचाइ (मोटाइ) र चौडाइ, २ फिट लम्बाइ गरी जम्मा ८ किलोको एउटा एएसी ब्लक हुन्छ। यो भनेको ९ वटा परम्परागत माटोको इँटा बराबर हो। त्यस्तै ६ र ८ इन्च उचाइ (मोटाइ) भएको गरी तीन आकारमा यो ब्लक बजारमा उपलब्ध छ।
कम्पनीले यी ब्लकको मूल्य भ्याटसहित क्रमशः १४४, २१६ र २८८ रूपैयाँ तोकेको छ।
'अहिले उपत्यकामा एउटा माटोको इँटाको मूल्य १८ रूपैयाँ पर्छ। ९ वटाको १ सय ६२ रूपैयाँ हुन्छ। एउटा एएसी ब्लकको १ सय ४४ पर्छ। यसबाट १८ रूपैयाँ सोझै फाइदा हुन्छ,' खड्काले भने।
यो ब्लकबाट निर्माण गर्दा समय पनि बचत हुन्छ।
९ वटा इँटा लगाउन मानौं ९ मिनेट लाग्छ। एउटा एएसी ब्लक राख्न एक मिनेट हाराहारी। समय बचाउन सकिने हुँदा श्रम खर्च कम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार ब्लकको बाहिरी सतह चिल्लो हुन्छ, प्लास्टर पनि गर्न पर्दैन। सिधै रङ लगाए हुन्छ। आकार एकनासको हुने भएकाले प्रयोग गर्न सजिलो छ। ब्लक संख्या नै कम लाग्ने भएकाले हरेकको जोडाइमा लाग्ने मसला (सिमेन्ट-बालुवाको मिश्रण) इँटाको तुलनामा आधा कम हुन्छ।
त्यस्तै रातो इँटाको तुलनामा टुटफुट भएर खेर जाने सम्भावना पनि यसमा कम हुने उनले बताए।
'समग्रमा एएसी ब्लक प्रयोग गरी घर बनाउँदा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म खर्च बचत गर्न सकिन्छ,' यसका फाइदाबारे खड्का भन्छन्।
मानौं, चार कोठाको एकतले घर बनाउन (जगबाहके) करिब १२ हजार रातो इँटा लाग्छ। ९ वटा रातो इँटा बराबर सानो आकारको (४/४ इन्च उचाइ/चौडाइ) को एएसी ब्लक हुन्छ। त्यसैले चार कोठे घर बनाउन लगभग एक हजार ४ सय वटा ब्लक मात्र चाहिने खड्का अनुमान गर्छन्।
यस हिसाबले १८ रूपैयाँ दरको रातो इँटा २ लाख १६ हजार रूपैयाँ पर्छ भने एएसी ब्लक १४४ रूपैयाँको दरले २ लाख २ हजार जति मात्र पर्छ।
यो अनुमानित लागत मात्र हो। घरको आकार र डिजाइन हेरी संख्या र मूल्य तलमाथि पर्न सक्ने खड्का बताउँछन्।
कस्तो निर्माणमा उपयोगी हुन्छ?
धेरै फाइदा हुँदाहुँदै पनि एएसी ब्लकका केही बेफाइदा पक्कै छ।
एएसी ब्लकमा भारवहन क्षमता माटोको इँटाका तुलनामा कम हुन्छ। त्यसैले घरको जगमा यो प्रयोग गर्न मिल्दैन। एक तले वा अग्लो घरको माथिल्लो तलामा भार कम होस् भनी प्रयोग गर्न ज्यादा उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
'एकतले घरमा ढुक्कले प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्कुल, अस्पताल भवनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,' खड्का भन्छन्, 'अनि कोठा विभाजनका लागि धेरै उपयोगी मानिएको छ। घरको जगमा भने प्रयोग गर्न मिल्दैन।'
पछिल्लो समय चार–पाँच वटा कम्पनीले नेपालभर एएसी ब्लक उत्पादन र वितरण गरिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, ०१:३५:००